နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Ischemic Heart Disease) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Ischemic Heart Disease)
Posted by manawphyulay on Oct 20, 2010 in Community & Society, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Parenting & Pregnancy |0comments
* Nitrates (Nitroglycerin..), Betablockers (propranolol, metoprolol…), Calcium channel blockers (Amlodipine, diltiazem…) စသည့် နှလုံးသွေးကြောကျယ်စေရန်နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း၊အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသောဆေးများ ။
* သွေးခဲခြင်းကိုတားဆီးပေးသောဆေးများ ie. Aspirin (Aspilet),…..။
* သွေးတွင်းကိုလက်စထရော များနေပါက ကျစေသောဆေးများ ie. Statins (Atorvastatin, Simvastatin,….)။